Swedish lwemali | swedish currency.net A guide to buy foreign currency for goods and services exports
Home Swedish lwemali RSS
The IsiSwidi Currency
The IsiSwidi lwemali(Krona) ubelokhu lwemali Sweden kusukela 1873. It is ekhishwe IsiSwidi ebhange kazwelonke, Sveriges Riksbank. NgesiNgisi, uhlamvu lwemali njalo wayebhekisela njengoba umqhele Swedish (Krona lisikisela umqhele IsiSwidi). Omunye Krona is ihlukaniswe yaba 100 penny. Noma kunjalo, bonke Ore zemali yalengiswa kusukela ngo-September 30, 2010. Imikhiqizo basaqhubeka elilinganisiwe Ore, Nokho uma ukukhokha imali yonke lokubolekwa kuthiwa kushintshwe Krona abaseduze. Izinhlamvu zemali manje zitholakala kanjani ukuze zisetshenziswe kukhona 1 Krona, futhi 5 futhi 10 imiqhele. Yemaphepha basesimweni nezigaba 20, 50, 100, futhi 500 imiqhele.
Sweden uye wafeza indlela kusiza yokuphila, ngenxa Ukuqhamuka izinkampani ezizimele, Izinzuzo lebanti kutenhlalo, uhlaka ukusabalalisa an advanced, kanye namandla umsebenzi ogxile abanamakhono. Umnotho ngamandla esisendaweni exchange ngaphandle, usebenzisa i sokusebenza kwempahla izingodo, Isikhungo samanzi, nensimbi nokumbiwa. Emhlabeni wonkhe eziphuthumayo zezimali of 2008 bancipha fare isithakazelo kanye nokusetshenziswa, zokuletha umnotho Swedish sehla phakathi ukubaleka nakuba izimali zayo okuqinile kanye ezimqoka. Solid ware abathengisa ingezwe ku-gxuma esiqinile emuva ngomnyaka 2010 ukuze 2011.
Lwemali IsiSwidi yethulwa ngo 1873, supplanting the Riksdalersgatan. The cash Yabekwa njengeyiqiniso i umphumela we zaseScandinavia Monetary Union ne Norway Denmark, okuyinto baqhubeka behamba kwaze kwagqashuka iMpi Yezwe I. Amafomu Monetary ngaphansi ukuhlabana ezazingaphansi kwawo nqampuna umhlabeleli ezingeni. I Monetary Union sebeqedile ukuvuleka-up kweMpi Yezwe I ngo- 1914. Sweden Unikelé esezingeni ezingeni on August 2, 1914, futhi ngaphandle ezishintshwe Swapping ngezinga inyunyana befika ekupheleni.
By ukuhlabana, Sweden iyadingeka ukuze ujoyine eurozone futhi umproselithe ukuba sisebenzisa Euro. Lokho kungase, UNkulunkulu uvikela kakhulu amelene kokuthola coin.On September 14, 2003, ezingamatshumi amahlanu nesithupha angu abavoti ngubani ubukele out bhunkula kokuthola Euro. Zisebenzisa i sigatshana ukuphunyuka, uhulumeni Sweden uye wathatha ukuba bangayi yeThemu yesi II, sibalulekile ekutholeni Euro.